» हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी गायब, खाली कुर्सी अगाडि सर्वसाधारणको लाईन, सुधार आउने छाँटकाँट नै छैन
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी गायब, खाली कुर्सी अगाडि सर्वसाधारणको लाईन, सुधार आउने छाँटकाँट नै छैन
२०७५, १८ जेष्ठ शुक्रबार १३:२८
मकवानपुर, १८ जेठ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा ,कर्मचारी व्यवस्थापन , कार्यालयमा आएका विभिन्न फाईलहरुको व्यवस्थापन , कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन यावत विषय लथालिङ्ग छ । सुधार गर्नुपर्यो भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो र मिडियामा समाचार पटक–पटक आईरहेका छन् तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यप्रणालीमा सुधार भने आउन सकेको छैन् । कर्मचारीको लापरवाहीको कारण सर्वसाधारणको सहजै सम्पन्न हुने काम पनि लामो समयसम्म अड्किरहेको छ । कार्यालययमा कर्मचारी नहुनु ,सर्वसाधारणको फाईल अलपत्र पर्नु जस्ता समस्या त साधारण हुन् ,सर्वसाधारणका सहजै हुने काम पनि हुदैन भन्दै मिति सार्दै फर्काउने चलन नगरपालिकाको पुरानै परम्परा हो ।
कार्यालयमा आउन पनि निकै अप्ठेरो मान्ने कर्मचारी कहिले काहिँ त कार्यालयमा हाजिरै हुँदैनन् । कार्यालयभित्रै बसेर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका कतिपय कर्मचारी १२ बजेसम्म कार्याल नै आउँदैनन् । तर किन ढिला आएको भनेर सोध्ने अधिकार पाएका व्यक्ति आँखामा पट्टी बाधेर बसेका छन् । मिडियाले कर्मचारीको हाजिरी विवरण माग्दा समेत थाहा नभएको बताउँछन् । अझै सर्वसाधारणको जिज्ञासामा सरकारी काम यस्तै हो भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
सर्वसाधारणहरुले आफ्नो फाईलको जिम्मा दिएको फाँटको कर्मचारी कार्यालयमा नआएपछि आफैं विभिन्न फाँटमा गएर फाईल लथालिङग हुने गरी खोतलीरहेका छन् । यो दृश्य आज कार्यालयमा प्रत्यक्ष देखिएता पनि यो यहाँको दैनिकी नै हो भन्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वसाधारणले ल्याएको नयाँ फाईल सामान्य तोक लगाएर फाईल दर्ता गराउनको लागि पनि १ हप्ता पछि आउनु भन्दै फर्काईन्छ । तर यस्ता लाजैमर्दो क्रियाकलाप नगरपालिकामा हुँदै आएता पनि सरोकारवाला निकायले केही बोल्न सकेको छैन । अनि कार्यालय सर्वसाधारणमैत्री बन्न सकेको छैन ।
स्रोतको सुचना पाएपछि आज शुक्रबार तु खबरको टोली नगरपालिकाको कार्यालयमा अवलोकनको लागि पुगेको थियो । करिब १ घण्टा सम्म बस्दा समेत घर आवासको निर्माण नक्सा पास , ईजाजत सम्पन्नता जस्ता कामको लागि काम गर्ने कर्मचारीका कुर्सी खाली थिए अनि सर्वसाधारण त्यहि कुर्सीको आडी लाईन लागेका थिए । केहि सर्वसाधारण भने नगरपालिका तर्फ धारे हात लगाउँदै घर फर्किरहेका थिए ।
यस बिषयमा तु खबरले नगरपालिकाका सुचना अधिकारी शंकर उपाध्यायलाई जिज्ञासा राख्दा उनले नगरपालिकामा यस्ता केही समस्या भएको स्विकार्छन् । तर उनले आज कति कर्मचारी आएका छन् ? कति बिदामा बसेका छन् भन्ने जानकारी दिन आफुले बुझ्नै पर्ने बताए । व्यवस्थापनको पक्षमा भने उनले सुधारको पहल गर्ने बताए ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयमा जनप्रतिनिधिका रुपमा मेयर हरिबहादुर महत आईसकेका छन् । मेयरसाप देखेपछि कर्मचारी नै थरर हुन्छन् भन्ने किस्सा पनि हेटौँडामा चलेकै हो तर उनकै नाकमूनि कर्मचारी गायब हुँदा उनले थाहा पाए कि पाएनन् ? यस बारे बुझ्नै पर्ने भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा खरो उत्रने मेयर महतले यो कुरा थाहा पाएमा कर्मचारीले डर कै कारण भए पनि सर्वसाधरणको काम गर्देलान् कि भन्ने आसा सर्वसाधरणहरुको रहेको छ ।